Wiil gacan ka jaban oo loo diiday daryeel caafimaad | Somaliska
Hospital ku yaala magaalada Skövde ayaa u diiday daryeel caafimaad wiil Soomaaliyeed oo 16 jir kaasoo aan wali sharci lahayn, ayadoo dakhtarku uu sheegay in uusan hubin in Laanta Socdaalka ay bixinaysa qaliinka wiilka. Wiilka ayaa qaliin uga baahan gacan horey uga jabtay asagoo ku jira xero qoxooti oo ku taala dalka Talyaaniga sida uu soo tabiyay Sveriges Radio. Wiilka ayaa raajo lagu saaray hospitalka Kärnsjukhuset oo ku yaala magaalada Skövde ayadoo dhaqtarku uu sheegay in wiilka uu baahanyahay qaliin balse uusan sameyn karin asagu maadaama ay Laanta Socdaalku dhiibto caafimaadka xaalada degdega ah oo keliya. Arintaan ayaa sharci jabin ku ah qaanuunka u yaal Sweden ee ah in dhamaan caruurta kuwa sharciga leh iyo kuwa aan lahaynba ay daryeel caafimaad oo siman leeyihiin. Kamuunka Mölndal oo wiilka uu iska dhiibay ayaa hospitalka ku dacweeyay Hayda Qaranka ee Caryta iyo Caafimaadka (Socialstyrelsen)
Hospital ku yaala magaalada Skövde ayaa u diiday daryeel caafimaad wiil Soomaaliyeed oo 16 jir kaasoo aan wali sharci lahayn, ayadoo dakhtarku uu sheegay in uusan hubin in Laanta Socdaalka ay bixinaysa qaliinka wiilka.
Wiilka ayaa qaliin uga baahan gacan horey uga jabtay asagoo ku jira xero qoxooti oo ku taala dalka Talyaaniga sida uu soo tabiyay Sveriges Radio.
Wiilka ayaa raajo lagu saaray hospitalka Kärnsjukhuset oo ku yaala magaalada Skövde ayadoo dhaqtarku uu sheegay in wiilka uu baahanyahay qaliin balse uusan sameyn karin asagu maadaama ay Laanta Socdaalku dhiibto caafimaadka xaalada degdega ah oo keliya.
Arintaan ayaa sharci jabin ku ah qaanuunka u yaal Sweden ee ah in dhamaan caruurta kuwa sharciga leh iyo kuwa aan lahaynba ay daryeel caafimaad oo siman leeyihiin.
Kamuunka Mölndal oo wiilka uu iska dhiibay ayaa hospitalka ku dacweeyay Hayda Qaranka ee Caryta iyo Caafimaadka (Socialstyrelsen)